၂ နှစ်နီးပါး ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ သားသမီးတွေ နဲ့ပြန်လည် ဆုံတွေ့ခွင့်ရပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သန္တာလှိုင် – Shwe Likes
၂ နှစ်နီးပါး ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ သားသမီးတွေ နဲ့ပြန်လည် ဆုံတွေ့ခွင့်ရပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သန္တာလှိုင်
Shwe | December 5, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒ ယ်သန္တာ လှိုင်ဟာ သူနဲ့အဆ င်ပြေအ သားကျနေ တဲ့နိုင်ငံကေ န မိသားစုသား သမီးေ တွရှိတဲ့ တိုင်းတစ်ပါးကို ထပ်မံရော က်ရှိသွားပါပြီ။ သူမဟာ အသက် ၄၀ ကျော်ေ နပြီဖြစ်ပေမယ့် မိန်းကလေး တိုင်း အား ကျရတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစား ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။
သန္တာလှိုင်က နိုင်ငံခြားမှာ သားသမီးေ တွကို ထားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်တွေအ များကြီးကြိုး စားလုပ်ေ နရင်း အခုလိုတိုင်းပြည် အာ ဏာသိမ်းမှုနဲ့ကြုံ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သန္တာလှို င်ဟာ ပြည်သူတွေနဲ့တော က်လျောက်ရပ်တ ည်ပေးခဲ့ပြီး သူမသားသမီးတွေ ဆီကိုပြန်တဲ့ အခါမှာလည်း လေဆိပ်မှာ ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ သန္တာလှိုင်တစ်ယောက် သူမချစ်တဲ့ သားသမီးတွေဆီကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့ အခုလိုလေး ရေးတင်လာပါတယ်။
“ဒီလိုသားမျိုးကို သားကို ဘယ်အမေက မကြွေဘဲ နေမလဲ….?
ဘဝတစ်ကွေ့ချိုးမှာ ပျော်ရာနေ ရာကိုစွန့်ပြီး တော်ရာကနေပဲ စလုံးရေက ပြန်စရမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ သားနဲ့ သမီးရောနဲ့ မိသားစု စုံစုံလင်လင် ပြန်စရတဲ့ အတွက် ဒီနေရာအထိေ ရာက်အောင် ကူညီပေးခဲတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရော စိတ်ပူပေးကြ တဲ့သူတွေအား လုံးကိုပါ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သားကိုဖ က်ပြီး နမ်းလိုက်တိုင်း အိမ်မပြန် လာနိုင်တော့တဲ့ သားသမီးတွေကို မျော်နေမယ့် မိဘတွေ့၊ သားသမီးတွေ စွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲကခံစားမှူကို ဖျောက်လို့မရဘူး၊ ရင်ထဲမှာ နင့်နေတုန်းပါ။ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။
အားလုံးကို သတိရနေပါတယ် ….”
သန္တာလှိုင်ဟာ သူမသားကိုဖက်ပြီး နမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း အိမ်မပြန် လာနိုင်တော့တဲ့ သားသမီးတွေကို မျှော်နေတဲ့မိဘတွေနဲ့ သားသမီးတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ မိဘတွေကို ကိုယ်ချ င်းစာမိပြီး ခံစားရကြောင်းပြောထားပါတယ်။
သူမကိုယ်တိုင် လည်း သားသမီးတွေနဲ့ ၂ နှစ်ကြာခွဲခွာခဲ့ရပြီးမှ ပြန်တွေ့ရတာကြောင့် အခုလို ခံစားချက်မျိုးကို ကောင်းကောင်း သိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလို သားသမီးလေးေ တွဆီ အခက်အခဲတွေကြားက ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ သန္တာလှိုင်အတွက် တကယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ Credit;
ေမာ္ဒ ယ္သႏၲာ လွိုင္ဟာ သူနဲ႔အဆ င္ေျပအ သားက်ေန တဲ့နိုင္ငံေက န မိသားစုသား သမီးေ တြရွိတဲ့ တိုင္းတစ္ပါးကို ထပ္မံေရာ က္ရွိသြားပါၿပီ။ သူမဟာ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ေ နၿပီျဖစ္ေပမယ့္ မိန္းကေလး တိုင္း အား က်ရတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစား ပိုင္ဆိုင္ထား တဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။
သႏၲာလွိုင္က နိုင္ငံျခားမွာ သားသမီးေ တြကို ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုေရာက္ရွိေနခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အလုပ္ေတြအ မ်ားႀကီးႀကိဳး စားလုပ္ေ နရင္း အခုလိုတိုင္းျပည္ အာ ဏာသိမ္းမႈနဲ႔ၾကဳံ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ သႏၲာလွို င္ဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ေတာ က္ေလ်ာက္ရပ္တ ည္ေပးခဲ့ၿပီး သူမသားသမီးေတြ ဆီကိုျပန္တဲ့ အခါမွာလည္း ေလဆိပ္မွာ ဖမ္းဆီးခံ ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သႏၲာလွိုင္တစ္ေယာက္ သူမခ်စ္တဲ့ သားသမီးေတြဆီကိုေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို ဗီဒီယိုေလးနဲ႔ အခုလိုေလး ေရးတင္လာပါတယ္။
“ဒီလိုသားမ်ိဳးကို သားကို ဘယ္အေမက မေႂကြဘဲ ေနမလဲ….?
ဘဝတစ္ေကြ႕ခ်ိဳးမွာ ေပ်ာ္ရာေန ရာကိုစြန႔္ၿပီး ေတာ္ရာကေနပဲ စလုံးေရက ျပန္စရမွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ သားနဲ႔ သမီးေရာနဲ႔ မိသားစု စုံစုံလင္လင္ ျပန္စရတဲ့ အတြက္ ဒီေနရာအထိေ ရာက္ေအာင္ ကူညီေပးခဲတဲ့သူေတြအားလုံးကိုေရာ စိတ္ပူေပးၾက တဲ့သူေတြအား လုံးကိုပါ အရမ္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
သားကိုဖ က္ၿပီး နမ္းလိုက္တိုင္း အိမ္မျပန္ လာနိုင္ေတာ့တဲ့ သားသမီးေတြကို ေမ်ာ္ေနမယ့္ မိဘေတြ႕၊ သားသမီးေတြ စြန႔္လြတ္လိုက္ရတဲ့ မိဘေတြရဲ့ ရင္ထဲကခံစားမႉကို ေဖ်ာက္လို႔မရဘူး၊ ရင္ထဲမွာ နင့္ေနတုန္းပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး။
အားလုံးကို သတိရေနပါတယ္ ….”
သႏၲာလွိုင္ဟာ သူမသားကိုဖက္ၿပီး နမ္းလိုက္တဲ့ အခ်ိန္တိုင္း အိမ္မျပန္ လာနိုင္ေတာ့တဲ့ သားသမီးေတြကို ေမၽွာ္ေနတဲ့မိဘေတြနဲ႔ သားသမီးေတြကို စြန႔္လႊတ္လိုက္ရတဲ့ မိဘေတြကို ကိုယ္ခ် င္းစာမိၿပီး ခံစားရေၾကာင္းေျပာထားပါတယ္။
သူမကိုယ္တိုင္ လည္း သားသမီးေတြနဲ႔ ၂ ႏွစ္ၾကာခြဲခြာခဲ့ရၿပီးမွ ျပန္ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ အခုလို ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ေကာင္းေကာင္း သိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုလို သားသမီးေလးေ တြဆီ အခက္အခဲေတြၾကားက ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ သႏၲာလွိုင္အတြက္ တကယ္ဝမ္းသာမိပါတယ္။ Credit;
တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ဘာတခုမှမရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဆေးခန်းကြောင့် သေရာပါမျက်လုံး ကန်းသွားခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ခွေးလေး အကြောင်းပြောလာတဲ့ ပိုးမီ
ရာသီအကူးအပြောင်းချိန် တောထဲတောင်ထဲမှာ အဖျားရောဂါခံစားနေရတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်
မိဘများမှ အမွေဖြတ်စွန့်လွတ်ကာ မိန်းမဖြစ်သူက တရားဝင်ကွာရှင်းကြောင်း အသိပေးလိုက်တဲ့ စီစဉ်တင်ဆက်သူ‌ဟျောင်း ကိုကျော်သက်လင်း
တကယ်တော့ ငရဲကြီး(၈)ထပ် ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးဆိုပီး (၉)ထပ်မြောက် ငရဲပြည် အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ မေဦး…